ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: October 2010
ကာလသားတွေက Zorro ဆိုတော့
ခိုးခိုးခစ်ခစ်ရယ်သံ နဲ့ အကြားအထိက
ဘ၀အမောတွေ ရဲ့ အတားအငြိတွေကို ခဏမေ့
လောကနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ နေသလား မသိ။
တစ်ချို့ကလည်း နား နားကြပ်နဲ့ 
တစ်ချို့ က အခုမှ
ရင်ခုန်သံ စတင်တော့မယ့် ပုံ။
အကြည့်မြှား ကို အကုန်လုံး ပစ်
ရှက်ပြုံး နဲ့ အကြည့်ကိုခံတယ်။
လှစ်ကနဲ အပြုံးပင့် ရင်ကိုဝင့်
မှန်းဆကာလို့တွေးတယ်သခင်ရယ်
၀န်ခံချက်(နောက်ဆုံးစကားလုံး က အဖေက အမေ့ကို ပေးသောစာထဲမှ စကားလုံး)
Posted by ကြည်ကြည် at 4:18 AM5comments:
ကြည်ကြည်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ မြန်မာပြည်မှာတုန်းက အားလုံးဆုံပြီဆိုရင် ဂျပန်လို အတင်းတွေ ပြောကြရီကြမောကြနဲ့ ပေါ့။ တစ်ခါ လည်း အို.က.မ ပါဟယ် လို့ ပြောမှိလို့ပန်ပန်လို တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ တိုးပြီး
“ ကောင်မတွေ …ဘာ အို.က.မ လည်း နားလည်တယ်ဟဲ့ နားလည်တယ်” ဆို ပြီး အပြောလည်းခံရသေးတယ်။
( အို က မ ဘာလည်းဆိုတာသိချင်ရင် ရှာကြည့် ပေါ့).
ဒီထဲကမှ အဆိုးဆုံးက အကိုကြီးပါပဲ။ အလွယ်တစ်ကူ ပန်ပန်လို သိပ်ပြောပါတယ်။ ဥပမာပေါ့နော် ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် ခဏကိုင်ထားနော် လို့မပြောပဲ သူက “chotto matte ne”။ စားကြသောက်ကြရင်လည်း သူက စားလို့ကောင်းတယ်မို့ လားဆိုရင် “oishii desho” စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။
သင်္ကြန်ရက်ပေါ့လေ ကြည်ကြည်တို့ ချောင်းသာသွားကြတယ်။ ဟိုရောက်တော့ များလိုက်တဲ့သူတွေ မိန်းကလေးတွေ ကလည်း ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ရတာ မလွပ်လပ်ဘူး ဘာဘူးပေါ့။ အမြင်နည်းနည်း စိမ်းနေသေးတာရယ် လူကလည်းများ နယ်ကလူတွေ ကလည်းတတ်လာ ဆို တော့ ကဲ ဒါဆိုငွေဆောင်သွားကြမယ်။ ငွေဆောင်မှာကနည်းနည်းဈေးကြီးတယ်။ ချောင်းသာက ပိုတန်တယ်ဆိုပြီး တနေကုန် စားလိုက်ကြတဲ့ ပင်လယ်စာ အမုန်းပေါ့။ ညနေဘက်ကြတော့ ကဲ ငွေဆောင်ဘက်ကူးမလားပေါ့ လမ်းတော့မကောင်းဘူး စမ်းမောင်းကြတာပေါ့
အော် ကြည်ကြည်မှာ ချောသောလှသော အမလေးလည်း တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အင်းပြောရရင်တော့ဘော်ဒီကလည်း တွန်ရိုင်ဒါ ကားထဲက ဂျိုလီကိုယ်လုံးမျိုး ပေါ့ ။ အဲ့အမ ချောချောက အတော်ကို ကြီးကျယ်တဲ့တစ်ယောက်ပါ။ ဂျီးကလည်း အလွန်များ အလှကလည်းအလွန်ကြိုက်ပေါ့။ ဘယ်လောက်တောင်ဂျီးများလည်းဆိုရင်ဖြင့် လာစပ်တဲ့သူတွေ ကို သူကတော့ဖြင့် နှာခေါင်းထဲက အမွှေးထွက်နေလို့ မကြိုက်ဘူး သူကတော့ဖြင့် ထမင်းစားရင် တစ်ရှုးထဲကိုယ် တံတွေးကိုထွေးပြီး လုံးပြီးဘေးမှာ ချတတ်လုိ့ သူကတော့ဖြင့် ဒူးနန့်တတ်လို့ စသည်စသည် အသေးအဖွဲ့တွေကအစ ဇီဇာကြောင်တတ်သူပေါ့။
ကြည်ကြည်ကပြောတယ် မမကြီး မယူဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားရင် အိမ်စပ်ပေးလည်း မကြည့်နဲ့တော့ အပျိုကြီးလုပ်မယ် ဆိုလည်း သိက္ခာရှိရှိ ဘယ်သူမှ စိတ်ကူးမနေနဲ့တော့ လိုက်ပြီးကြည့် ပြီးရင် အဖြစ်ပါဘူး အပျိုကြီးပဲ လုပ်မယ်ပြော ပြီးတော့အိမ်က စပ်ပြန်ပြီဆိုရင် မမကြီးက ကြည့်ပြန်ပြီ မမကြီးတို့က စိတ်လည်းမပြတ်ဘူး အဲ့ဒါတွေ မမိုက်ဘူး လို့ပြောမှိလို့ ကြည်ကြည်ကို မခေါ်တာ ဒီခရီးကြမှ ပြန်ခေါ်တာ။
ဟိုတယ်ကနေထွက်လာပြီး ၁နာရီလောက်ကြတော့ ဗိုက်စပြီးနာကြပါတယ်။ ကြည်ကြည်ရော အမချောလေးရောပေါ့ ကဲ လာလေ့ရော ဆိုပြီး ကြည်ကြည်တို့ တောတိုးကြရပါတော့တယ်။
ရေသန့်ဗူးလေးတွေ ကိုယ်စီကားပေါ်ကတစ်ရှုးဗူး ကိုကိုင် ပြီးတော့ ပေါ့လေ။ တော်သေးတာပေါ့ ရေသန့် ဗူးခေတ်မို့ လို့။
ကြည်ကြည်တို့ ဦးလေးတွေ ခေတ်ကဆိုရင် ဘယ်လို စကြလည်းဆိုရင်တဲ့ အုတ်ကြားမြက်ပေါက် ကြံဖတ်အီးကုန်း တဲ့( ကန်တော့နော် ကန်တော့ ) သူတို့ ပြောတာပဲလေ ။
အင်းအတိုချူပ်ရရင်တော့ ငွေဆောင်ရောက် ဆေးပေးခန်းသွား မက်ထရို ယူ ဒါပဲလေ။ နောက်နေ့ မနက်ရောက်တဲ့အထိ ၂ ယောက်သား ရေထဲမဆင်းနိုင်ကြဘူး။ သင်္ကြန်အတတ်နေ့ မို့လို့ ထင်တယ်။ အနီးနားက ရွာကလူတွေ ပုသိမ်က ဆင်းလာတဲ့သူတွေလည်း များလာကြတယ်။ အားလုံးကိုကြည့်ရင်းပျော်လာတယ်။ မမကြီးရေထဲဆင်းမလားပေါ့ အေး ဆင်းမယ်တဲ့ သူကလည်း ချက်ခြင်း။
အကိုကလည်း ဝေးဆိုပြီး ထုံးစံအတိုင်းဂျပန်လို အော်ပြောတယ် လာခဲ့ ကြ ပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့။ ကျွန်မရဲ့အမချောက ဘစ်ကနီဝတ် ပြီးတော့ ချားလစ်အန် အိန်ဂျယ်ထဲ ကလို စတိုင်ပေးပြီး ရေစပ်နားဆင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ အကိုကြီးနား မသွားကြဘူး နည်းနည်းလှမ်းတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ လှိုင်းလုံးတွေ စစခြင်းတော့ ရွာသူလေးတွေ က ထမီတွေနဲ့ ရေထဲမှာဆော့ကြ ရေက ဆွဲတော့ ထမီလေးတွေ ကျွတ်တော့မလို နဲ့ ကြည့် ရတာ သည်းတထိတ်ထိတ် သူတို့ ကလည်း ဘီကီနီနဲ့ မမတွေ ကို ကြည့် ရွာသားတွေ ကလည်းကြည့်ပေါ့လေ။
ဒီလိုနဲ့ လှိုင်းလုံးကြီး တစ်လုံး ၀ုန်းကနဲ အလာ ညီအစ်မ နှစ်ယောက် တလိမ့်ခေါက်ကွေးနဲ့ကမ်းစပ်ကိုလွှင့် သွားလိုက်ကြတာ ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ရေဓတ်တွေ ကပဲ အဆုံးရှုံးလွန်သွားသလား တစ်ရက်လောက် အတွင်းမှာပဲ သိသိသာသာ ဘော်ဒီကပြောင်းသွားလား မသိပါဘူး။ ရေနဲ့ တင်မုးနောက်ပြီး ဘာမှကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူး။
တဖူးဖူးနဲ့ ပါးစပ်ထဲဝင်တဲ့ သဲတွေ ကိုထွေးထုတ်ရင်း သဲပေါ်မှာ ထိုင်ရက်သားမှတ်မှိလိုက်တာက မျက်စိထဲ မှာ ပျာရီးပျာရာနဲ့ ပြေးလာပြီ ပါးစပ်ကလည်း ထစ် အ ထစ် အ နဲ့ အော်ရင်းပြေးလာတဲ့ အကို ကြီး..a re...are.. are……ပြီးလည်ပြီးရော သူ့မှာ အမောဆိ်ု့ သလိုနဲ့ လှမ်းအော်လိုက်တယ် ကျွန်မ အမကြီးကို အင်္ကျီင်္ ရောတဲ့
အာ……….အဲ့ ဒါကြတော့ မြန်မာလို လည်းထွက်ရော ရေထဲ မှာ ဆော့နေကြတဲ့ ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ 
တညီတည်း ကမ်းစပ်ဆီသို့ …………
အဲ့အမချောချောအဲ့ နေ့ က ညစာမစားဘူး အကိုကြီးကို စိတ်ဆိုးလို့ ….
Posted by ကြည်ကြည် at 11:17 PM2comments:
ပန်းတစ်ပွင့်ကြွေ အကျ
မြေမခ ခင် လက်တစ်စုံ ကဖမ်း
ရနံကိုတွေ့ကမ်းကိုမေ့ ခဲ့ တယ်။
တစ်စ စီ ဖြစ်မှ
လေပေါ်ကို ၀ဲဖြန့် 
မြေပေါ်သို့ကျဲ ပြန့် စေခဲ့တယ်။
တခန်းရပ်တွေ နဲ့ကစား
ပတ်ဝန်းကျင်ကို စကန်စက် နဲ့ အမြန်ဖတ်
မြတ်နိုးခြင်းကို ပွိုင့် လောက်တောင်မှ မထောက်ခဲ့သူ။
အနိုင်နဲ့ ပိုင်းရမယ့်ပွဲ တွေ လို့ ပဲ သတ်မှတ်
ဒီည ကျွန်တော် အိပ်မပျော်ပြန်ဘူး
အကြားအာရုံကို အမှောင်ချ ပြီး အဝေး
ကျွန်တော့်အာရုံ ဆီ ငြိငြိလာနေတဲ့ အတွေး…
အချစ်ကို ကလေးကလား လို့ ထင်တဲ့ 
အဆင်းကို လည်း မသိနိုင်သော
သူ့ ချစ်ခြင်းဆိုတာ ပြေး စေသော်
ကိုယ့် ချစ်ခြင်းဆိုတာ ဝေးစေသော်။
Posted by ကြည်ကြည် at 12:17 AM3comments:
Posted by ကြည်ကြည် at 11:57 PM6comments: